यात्रामा कहिले पनि दुर्घटनाको कुरा गर्न हुदैन रहेछ ! दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो भन्छन् केशव पाण्डे… – mero sathi tv
यात्रामा कहिले पनि दुर्घटनाको कुरा गर्न हुदैन रहेछ ! दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो भन्छन् केशव पाण्डे…
On ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०४:५२
खुसीले मन ढक्क फुलेको थियो । एक्कासी ड्याङ्ग आवाज आयो। त्यसपछि होसमा आउँदा त मेरो एउटा खुट्टा चलिरहेको थिएन । प्लेनतिर हेर्दा धुवाँ आइरहेको थियो,विमान दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएर मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीमा उपचार गराइरहेका ट्राभल एजेन्ट केशव पाण्डेले भने ।
अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गराइरहेका पाण्डेलाई मृत्युको नजिकैबाट गुज्रिएको त्यो समयको धमिलो सम्झना मात्रै छ । उनी भन्छन्, ‘प्लेन ठोक्कियो भन्ने महसुस हुँदै थियो, बेहोस भएछु । पछि होसमा आउँदा त म चौरमा थिएँ । माथिबाट पानी वा तेल केही खसिरहेको थियो ।’
त्यही समय उनको मनले त्यहाँबाट दौडिन भन्यो। उनी दौडिन खोजे, तर दाहिने खुट्टा सर्नै मानेन ।
‘बाँचियो भन्ने खुसी फेरि दुःखमा परिणत भयो। प्लेनतिर हेरेँ, प्लेनमा धुवाँ पुत्पुताइरहेको थियो । अब प्लेन पड्किन्छ जस्तो लाग्यो ।’ यत्तिकैमा उनले नजिकै सेना र अरु उद्धारकर्मीहरु दौडिरहेका देखे। उद्धारका क्रममा उनलाई उठाएर गाडीमा राखियो । त्यसपछि फेरि बेहोस भएका उनी नेपाल लाइभकर्मी अस्पताल पुग्दा भर्खरै होसमा आएका थिए। डाक्टरले उनको प्रारम्भिक उपचार र जाँच सकेका थिए ।
‘प्लेन उपत्यका भित्रिएपछि आइपुगियो भन्दै सबै यात्रु खुसी भयौं। तर, प्लेन त विमानस्थलको धावनमार्ग क्रस गरेर अघि पो बढ्यो’, पाण्डेले दुर्घटना अगाडिको दृश्य सम्झिए । उनका अनुसार, विमान अवतरण नभए पनि एकदमै तल झरिसकेको थियो । ‘कपन पुग्दा घर र रुख छोला जस्तो भएको थियो’, उनले भने, ‘मन केही आत्तिएको थियो। तर, प्लेन बुढानीलकण्ठ र बालाजुतिर घुम्दा केही माथि पुग्यो ।’ उनले आफूसँगैको सिटमा रहेका व्यक्तिसँग भने– ‘प्लेन चक्कर लगाउन थाल्यो। पक्कै पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक जाम छ ।’
साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित बहुप्रतिक्षित चलचित्र तिमि संगको ट्रेलर सार्बजनिक
हेर्नुहोस, साम्राज्ञी लाई Prank गर्न खोजेका माग्ने बुढा आफै बनेछन् उल्लु (भिडियो)-